Mpihira Flamenco 3 Mampiato Ny Fivorian’ny Antenimieran’i Andalozia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2014 20:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, عربي, Deutsch, polski, Português, বাংলা, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny fihetsiketsehan'ny FLO6x8 tao amin'ny antenimieran'i Andalozia.
Tanànan'ny flamenco, kanto hira vokatry ny tany fantatra amin'izy mozika mampientanentana, mpihira matanjaka sy dihy mahasarika. ny faritra atsimon'i Andalozia, ao Espaina. Matetika miresaka fitiavana sy fisarahana, ary koa fanaintainana, fahantrana sy alahelo ireo tononkira — lohahevitra izay fantatry ny ankamaroan'ny Andaloziana tsara ihany koa tao anatin'izay taona vitsy izay.
Nanatontosa fampihenana mamaivay amin'ny tetibolan'ny fandaniana i Espaina hatramin'ny nitoloman'ny firenena ny krizin'ny toekarena mandravarava tao anatin'ny taona maromaro. Nitombo ny isan'ireo mahantra sy tsy an'asa manerana an'i Espaina, saingy voakasik'izany mafy indrindra ihany koa i Andalozia..
Toe-javatra mahazatra ny fihetsiketsehana, saingy nanao hetsika maha-Andaloziana azy manokana ny fikambanana iray. Tamin'ny faran'ny volana Jiona, mpikambana telo avy ao amin'ny FLO6x8 no nampiato tsirairay ny fivorian'ny antenimiera tamin'ny alalan'ny fihirana hira amin'ny endrika flamenco izay niampanga ny tsy fananan'asa, ny kolikoly ary ny krizy.
Isaky ny manao fihetsiketsehana, dia voaaisotra tao amin'ny lalantsara hivezivezen'ny olona ireo mpanao fihetsiketsehana fotoana fohy aorian'ny nanombohan'izy ireo nihira. Tsy dia nahazo fitantarana firy tamin'ny fampahalalam-baovao ny fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany, saingy nalaza tao amin'ny aterineto kosa ny lahatsary nokirakiraina navoaka tao amin'ny Facebook izay nisy nizara in-48.000. Jereo eto ambany eto ny zava-nisy tamin'ny fihetsiketsehana, ahitana dikan-tsoratra amin'ny teny Anglisy:
Nitsikera ny tsy fisian'ny asa ao Espaina, izay nanery ireo tanora Espaniola marobe niala tao amin'ny firenena mba hitady asa any ivelany ny mpihira voalohany:
izany no tianareo hita amiko
na izaho mifindra monina.
raha mihamatavy amin'ny fandroahana ianareo
ary mpisolelaky ny troïka avokoa ianareo rehetra.
Tsy an'asa ny roa am-pahatelon'ny Andaloziana, araka ny tarehimarika farany avy amin'ny sampan-draharahan'ny antontan'isan'ny Vondrona Eoropeana Eurostat. Niakatra 11 % teo amin'ny taona 2007 sy 2012 hatramin'ny 24,1 %, iray amin'ireo ambony indrindra ao Espaina ny tahan'ny fahantrana ao amin'ny faritra, izay ny fambolena sy ny fizahantany no indostria lehibe indrindra..
Nangataka famonjena ara-bola tao Madrid i Andalozia tamin'ny Septambra 2012, nanjary faritra fahaefatra nanao izany fangatahana fanampiana izany. Efa nahazo fanavotam-bola 126 miliara dolara ho azy manokana koa i Espaina avy amin'ilay antsoina hoe “troïka” — ahitana ny Mpamatsy vola iraisam-pirenena (Fonds Monétaire International), ny Vaomiera Eoropeana ary ny Banky Foibe Eoropeana — volana vitsy teo aloha mba handrafetana indray ny sehatra ara-bankiny izay marefo dia marefo.
Nanatontosa fihetsiketsehana tahaka izany tao anatina banky ihany koa ny FLO6x8, sady mihira, mandihy sy mitendry gitara. Jereo:
Mitaky famolavolana lalàmpanorenana vaovao miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ireo Espaniola rehetra ny vondrona. Mandra-piandry izany, mampanantena ireo mpanao politika izy ireo fa “haneho hevitra ao amin'ireo toerana natokana hoan'ny vahoaka, izay hanehoanareo ny endrikareo mahafatifaty, izahay.”